Qabduu Saaguu fi Gulaaluu
Qabduu Ajajaa Galmeetti Ida'uu
Kamshaa to'annoowwan unkaa fi to'annoowwan biroo fayyadamuun sanduuqota filannoo, qabduu, gabateewwan kuusaawwan deetaa agarsiisan galmeetti ida'uu ni dandeessa.
Qabduu Galmeetti Ida'uu
Mul'annoo - Kamshaawwan - To'annoowwan Unkaa fili.
Kamshaa To'annoowwan Unkaa irraa, sajoo Qabduu Dhiibaa cuqaasi .
Akeektuun hantuutee gara rifeensa-qaxxaamuraatti jijjiirama.
Galmee keessaa, qabduu fakkaasuuf harkisi .
Qabduu mirga-cuqaasiiti To'annoo fili.
Amaloota qabduu ifteessi.
Moggaasa qabduu jijjiiruuf, caancalaa Waliigala cuqaasiiti, barrucha sanduuqa Moggaasa keessaa gulaali.
Maaykiroo qabduutti qabsiisuuf, caancala Mudatoota cuqaasiitii qabduu cinaa gocha qabduu kan akka maayikiroo figsisuuf barbaaddu ... cuqaasi. Qaaqa Assign Macro keessaa maayikiroo isa fayyadamtuu barbaaddu teessisiiti, achii TOLE cuqaasi.
Qaaqa Amaloota cufi.
(Dirqala) Amaloota unkaa kan itti qabduun ramadamu ifteessi
Qabduu Mirga-cuqaasiiti Unka fili.
Qaaqni Amaloota Unkaa ni banama.
Unkichaaf amaloota ifteessiiti qaaqicha cufi.
Title is: Qabduu Saaguu fi Gulaaluu